သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာ ၀ န်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြုသဘောဆောင်။ ပျော်စရာကောင်းသောပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုဖန်တီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းပြချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြောင်းရင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောင်းသားများ၏တိုးတက်မှုကိုထောက်ခံပြီးကျောင်းသားအားလုံးအောင်မြင်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
ကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကိုပြီးမြောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့များအတွင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါတို့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်စည်းလုံးခဲ့တယ်!
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းပတ် ၀ န်းကျင်သည်ပြောင်းလဲမှုရှိသည်။ ပြောင်းလဲနေသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ယူရန်၊ ၄ င်းတို့၏စွမ်းရည်တိုးတက်ရန်နှင့်နည်းစနစ်အသစ်များအတွက်ဗဟုသုတရှိရန် ၀ န်ထမ်းများလိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းသည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ဦး စားပေးအသစ်များကိုအမြဲတမ်းနားလည်နိုင်ရန်ဆန်းသစ်တီထွင်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အစပြုလုပ်ဆောင်သူများနှင့်သူတို့၏တာ ၀ န်များအပေါ်တွင်သာလွန်။ လုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရသူများအားကျွန်ုပ်တို့တန်ဖိုးထားသည်။
အလုပ်သင် & အလုပ် - လေ့လာမှုအခွင့်အလမ်းများ
သင်ကောလိပ်ကျောင်းသားမဟုတ်သောအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအတွေ့အကြုံရရှိရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ထိုအခါသင်သည် APIE များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောမထိုက်မတန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်! အလုပ်သင်များနှင့်အလုပ်လေ့လာမှုအခွင့်အလမ်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနများကိုအထောက်အကူပြုသည်။ အလုပ်သင်သို့မဟုတ်အလုပ် - လေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းအတွက်လျှောက်ထားပြီးသင်၏အရည်အချင်းကိုယနေ့တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။